Magetsi Kushambadzira Chigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - China Magetsi Kushambadzira Chigadzirwa Fekitori
Zvatinotengesa zvinowanzozivikanwa uye zvakavimbika nevashandisi vekupedzisira uye zvichasangana nekuramba zvichichinja zvido zvemari uye zvemagariro zveMagetsi Kushambadzira Chigadzirwa,,,, Tinofungidzira isu tichava mutungamiri mukuvaka nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro mumisika dzakaenzana dzeChinese nevekunze. Isu tinoshuvira kushandira pamwe nedzimwe shamwari dzakawanda dzekudyidzana kwakawedzerwa mabhenefiti. Senzira yekukupa zvirinyore uye kuwedzera basa redu, isu zvakare tine vaongorori muQC Workforce uye tinokuvimbisa rutsigiro rwedu rwakakura uye mhinduro yeMagetsi Ekushambadzira Chigadzirwa, Kwemakore, iine yepamusoro mhinduro, yekutanga- kirasi sevhisi, ultra- mitengo yakaderera tinokuhwina kuvimba uye kudiwa nevatengi. Mazuva ano zvigadzirwa zvedu zvinotengesa zvese pamusoro pezvekunze nekunze. Kutenda kune yakajairwa uye nyowani vatengi rutsigiro. Isu tinopa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye mutengo wemakwikwi, gamuchirai vatengi venguva dzose uye vatsva vashande nesu!
2 mu1 Imbwa Nail Grinder & Bvudzi Rinogadzira rinogona kunyatsogadzirisa dambudziko remanyoro akapinza uye kuchenesa kwembambo kwezvipfuyo. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kucheka bvudzi refu rechipfuwo kubvisa bvudzi rinoyangarara. Izvo hazvisi zvembwa chete, asiwo zvemarudzi ese zvipfuyo.